चटपटे प्रश्न अटपटे जवाफ - होली - साप्ताहिक
चटपटे प्रश्न अटपटे जवाफ
- कृष्ण भट्टराई/सुव्रत आचार्य
भाङ-धतुरो खाएर जोगी बन्छु
- सीताराम कट्टेल, धुर्मुस
पोखराको महेन्द्रगुफा कहाँ पर्छ ?
बडो गाह्रो प्रश्न सोध्नुभयो । सोच्नैपर्छ । अँ...महेन्द्रगुफा त पोखराकै चमेरे गुफाको आडमा छ, हैन र ?
मान्छे हावामा उड्न थाले भने ?
यस्तो चमत्कार हुन थाल्यो भने त हजाईजहाज नै चाहिएन नि ।
प्रश्न यो हो कि उत्तर के हो ?
मलाई नै झुक्याउने प्रश्न पो सोध्नुभयो, उत्तर त दिशा हो नि ।
मान्छेलाई भोक नै नलाग्ने भयो भने ?
यदि त्यस्तो भयो भने त भातै खानुपर्दैन, टन्टै साफ । ग्याँस बच्यो, चामल बच्यो, तेल पनि बच्यो ।
पिसाबबाट सवारी साधन चल्ने भयो भने के होला ?
खाडी मुलुकका मान्छे भोकै पर्छन् । तेल उतैबाट आउने हो क्यार !
भिनाजुलाई दंग्याएर टन्न पैसा कमाउनुबाहेक सालीहरूले अर्को कुनै उपाय देखेका छैनन्, त्यसैले ।
यौनसम्पर्कबाट पनि बच्चा नहुने भयो भने ?
टेस्टट्यूब बेबी जन्माउने नि, डा. भोला रिजाल जिन्दावाद ।
स्वाइन फ्लु, बर्ड फ्लुजस्तै धेरै हास्ँने मानिसलाई रहास्य फ्लु’ लाग्ने भयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
त्यस्तो फ्लू लाग्यो भने हाम्रो कामै के रह्यो र ? म त भाङ-धतुरो खाएर जोगी बन्छु ।
भीडभाड भएको ठाउँमा कुनै युवतीले 'तपाईंको पाइन्टको फस्नर खुल्लै छ’ भनिन् भने ?
म त मर्छु कि क्या हो...
तपाईंले कहाँ गर्नुभएको हो थाहा भएन, योचाहिँ मेरै कानमा पर्‍यो हजुर भन्छु ।
कलाकार कुनै जाति, धर्म तथा पार्टीको हुँदैन
- पल्पसा डंगोल, चम्सुरी
बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी कहाँ छ ?
मलाई झुक्याउन खोज्नुभएको होला, लुम्बिनी त कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ नि ।
हामी दु:खी हुँदा रुन्छौं, खुसी हुँदा हास्छौं तर कहिलेकाहीं खुसी हुँदा पनि रुन्छौं, किन ?
धेरै खुसी सहन नसक्दा अथवा धेरै खुसी व्यक्त गर्न नसक्दा आँखाबाट त्यसै आँसु बग्छ ।
ओहो...धेरै नै फरक छ नि । श्रीमान्ले श्रीमतीमाथि बढी नै हक जमाउँछन् तर प्रेमीमाथि सम्पूर्ण रूपले हक जमाउने अधिकार प्रेमिकालाई मात्र हुन्छ । श्रीमान्हरू खर्च गर्न डराउँछन्, प्रेमिहरू प्रेमिकाका लागि जत्ति पनि खर्च गर्न डराउँदैनन् ।
मेरो विचारमा २० वर्ष कटेपछिको उमेर सही हो । त्यसो त अचेल ४० कटेपछि पनि जवानी आउँछ भन्छन् ।
जीवन कसैसँग साट्न पाए कोसँग साट्नुहुन्छ ?
त्यस्तो मौका पाएँ भने त आफ्नो जीवन कुनै अवोध बालिकासँग साट्थें । बाल्यकाल एउटा त्यस्तो समय हो जहाँ जीवन सर्वाधिक सुखद हुन्छ ।
तपाईंको सबैभन्दा ठूलो पश्चाताप के हो ?
उमेर नपुगी गरेको विवाहप्रति मलाई असाध्यै ठूलो पश्चाताप छ । एसएलसी सकिनेबित्तिकै विवाह गर्न हतारिनु मेरो ठूलो गल्ती थियो ।
कलाकार कुनै जाति, धर्म तथा पार्टीको हुँदैन । कलाकार सबैको हुनुपर्छ ।कलाकारहरूले राजनीति गरेको पटक्कै मन पर्दैन ।
भोक नै लाग्न छाड्यो भने त आनन्दै भैहाल्यो नि । काम पनि गर्नुपरेन, खानु पनि परेन । साँच्चै त्यस्तो भयो भने मानिसहरू एक-अर्कासँग लडाइँ-झगडासमेत गर्न छोड्थे होला हैन ?
श्रीमान्ले तीजको व्रत लिनैपर्ने नियम आएछ भने ?
आएछ होइन, त्यस्तो नियम आउनैपर्छ । सधैं श्रीमतीले मात्र तीजको व्रत बस्नुपर्छ भन्ने छ र ?
श्रीमती ल्याउन ६-७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ
- निर्मल शर्मा, गैडा
गोलभेंडालाई नेपालीमा के भनिन्छ ?
गोलभेंडालाई नेपालीमा रातो रंगको अचार खाने पदार्थ भनिन्छ । विदेशीहरू यसैलाई काटेर सलाद बनाएर खान्छन् ।
जमाना नै पैसाको छ । जुत्ता लुकाउनु पनि एउटा व्यापार हो । जुत्ता लुकाउँदा पैसा आउँछ भने किन नलुकाउने भनेर पनि सालीहरू यो काममा अग्रसर हुन्छन् ।
महिलाहरू तालु खुइले भए भने सिन्दूर कहाँ लगाउलान् ?
महिलाहरूले सिन्दूर लगाउने परम्परा नै लोप हुने अवस्थामा छ । विवाहित नारीहरू अचेल सिउँदोमा होइन, आफ्नो ब्यागमा सिन्दूर बोकेर हिंड्न थालेका छन् । कसैले सिन्दूर खै त भनेर सोध्यो भने पकेटमा छ भन्छन् ।
गुलाबजामुनमा गुलाबचाहिं कहाँ हुन्छ ?
यो त धनबहादुर भन्ने मान्छे किन गरिब भनेजस्तै हो । गुलाबजामुनमा गुलाब हुँदैन ।
एउटा लामखुट्टे तपाईंकी श्रीमतीकी गालामा आएर बस्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
इमरान हासमी लामखुट्टेको रूप धारण गरेर श्रीमतीको गालामा चुम्बन गर्न आएछ भन्ने कुरा सोच्दै चुप लागेर बस्छु ।
अरुले काम गर्दा तपाईंले पैसा कमाउने जागिर के होला ?
रत्नपार्कको सार्वजनिक शौचालयमा अरूले दिसा-पिसाब गर्छन्, आफ्नो काम पैसा गन्ने मात्र हुन्छ ।
केटाहरूले तिघ्राको रौं सफाचट पारेर चिल्लो बनाई फोटोसेसन गरे भने उनीहरू साप्ताहिकको नजरमा पर्न सक्छन् ।
तपाईंका लागि सबैभन्दा हाँसोउठ्दो क्षण ?
आज सबै मान्छे हतारमा छन् । कसैलाई फुर्सद छैन । बिहानदेखि बेलुकासम्म मानिसहरू दौडिरहेको देख्छु । उनीहरू केका लागि यस्तो भागदौड गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सोचेर असाध्यै हाँसो लाग्छ ।
श्रीमती ल्याउन ६-७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । ३०-३५ हजार रुपैयाँमा राम्रो फोन पाइन्छ, त्यो पनि स्मार्ट । योभन्दा राम्रो फरक के होला ?
प्राय: श्रीमतीहरू आफ्ना श्रीमान्प्रति किन शंका गर्छन् ?
घरबाट चिटिक्क परेर नक्कल पार्दै बाहिरिने श्रीमान्का श्रीमतीहरूले मात्र उनीहरूप्रति शंका गर्छन् ।
प्रधानमन्त्रीका लागि संवाद राख्दिनँ
- दीपकराज गिरी
नेपाल लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र घोषणा भयो भने ?
क्यान्डल लाइट डिनरको मज्जा लिन पाइन्छ, जुन हरेक दिन भैदिनाले यो शब्दकै अवमूल्यन भैरहेको छ ।
यही वैशाखदेखि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँछ रे नि !
त्यसो हो भने म आफ्नो घरमा २०७२ सालको होइन, २०८० सालको क्यालेन्डर झुन्ड्याउँछु ।
कसैले तपाईं भनोस् कि नभनोस्, आफैं मपाइँँ हुनेलाई के भन्नुहुन्छ ?
कस्तो ऋषि धमलाजस्तो भन्छु ।
किन घाँटी हेरेर हाड निल्नु भनिएको होला ?
घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेको छवि र रेखाको विवाह हो, तर यहाँ को घाँटी हो र को हाड हो, त्यो मलाई थाहा भएन ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तीतो सत्यमा अभिनय गर्छु भनेर प्रस्ताव राखे भने ?
प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि संवादचाहिँ राख्दिनँ, डाइलग जति सप्पै केपी ओलीलाई दिन्छु ।
दीपाश्री निरौलाले विवाह गर्नर्ैपर्छ भन्नेर जिद्दी गरिन् भने ?
'ओके' भन्छु र निखिल उप्रेतीजीलाई फोन गरेर भारतमा भूमिगत हुने ठाउँ कहाँ छ भनेर सोध्छु ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा तपाईंलाई नियुक्त गरियो भने पहिलो काम के गर्नु हुन्छ ?
पहिलो काम 'मुखौटा', 'छड्के' जस्ता चलचित्र हेर्छु, किनभने मेरो हैसियत यिनै चलचित्र बनाउने हो, यिनीहरूकै हितमा काम गर्नु हो, जहाँ ९० प्रतिशत यस्तै चलचित्र बन्छन् ।
सूर्य किन पश्चिमबाट उदाउँदैन ?
सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैन, किनभने सूर्यबहादुर थापाको घर पूर्व हो ।
सात दिन लगातार नसुत्दा मेरो होइन, भुवन केसी दाइको पो हालत के होला ?
केबुलकार बीचैमा एक घण्टा बन्द भयो भने ?
नम्रता श्रेष्ठले बनाएको चलचित्र 'सोल सिस्टर' हेर्छु अनि के बोर ? निदाएपछि बोर भा'को सुन्नुभा'छ ?
तपाईंले कहिल्यै ढुंगा खोज्दा देउता फेला पार्नुभएको छ ?
मैले ढुंगा खोज्दा देउता भेटेको छैन, बरु देवता खोज्दा देश, दृष्टिकोण अनि दुई किनारचाहिँ भेटेको छु ।
भुक्ने कुकुरले पनि टोक्न थाल्यो भने ?
चलचित्र 'सुन्तली' को डिभिडी देखाउने र मलाई टोक भन्ने । त्यसपछि यो चलचित्रले भन्न खोजेको के रहेछ भनेर सोच्दा-सोच्दै कुकुरको आयु नै सकिन्छ, कुरै खत्तम ।
लोग्ने-स्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्ने उखान तपाईंको वैवाहिक जीवनमा लागू भएको छ कि छैन ?
परालको आगो भए सहन्थें, मदन घिमिरेको 'आगो' पर्‍यो, कसरी सहनु ?
स्वास्नी मान्छेको उमेर नसोध्नु भन्छन्, तपाईंले कसैको उमेर सोध्नुभएको छ ?
सोधेको छु नि करिश्मा मानन्धरको, तर असाध्यै सत्यवादी नायिका हुन्— करिश्मा ।
रेखाको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार
- शिवशंकर रिजाल, जोगिन्दर पानवाला
तपाईं दिनमा कत्ति खिल्ली पान खानुहुन्छ ?
म दिनमा दुई खिल्ली पान खान्छु । पहिले-पहिले ६-७ खिल्लीसम्म खान्थें ।
सबैभन्दा स्वादिलो गरी पान खाने नेता ?
किसुनजी सबैभन्दा स्वादिलो गरी पान खानुहुन्थ्यो ।
सबैभन्दा स्वादिलो गरी पान खाने कलाकारचाहिं को नि ?
शिवहरि पौडेल स्वादिलो गरी खाने, पुरी चपाएजस्तो खानेचाहिं राजेश हमाल । हमालले एक मिनेटमा एक खिल्ली पान खाइसक्छन् ।
तपाईंको पान पसलमा अब कसलाई ल्याउन बाँकी छ ?
नेता, अभिनेता सबै आए, अब अख्तियारका प्रमुख तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याउने ठूलो रहर छ ।
तपाईंलाई "भैया" भनेर सम्बोधन गर्दा कस्तो लाग्छ ?
मलाई जहाँ जाँदा पनि भैया भनेर सम्बोधन गर्छन् । त्यसरी बोलाउँदा सबैभन्दा बढी खुसी लाग्छ ।
दिउँसै सपना देख्नुभा"को छ ?
दिउँसो सपना त देख्दिनँ, तर यात्रा गर्दा विभिन्न कल्पना भने गरिरहन्छु ।
समोसा खाँदा भित्र आलुको साटो खुर्सानीमात्र पाइयो भने ?
म त खुर्सानीको पारखी हुँ, तर आलुको साटो खुर्सानी नै पाइयो भने पक्कै दु:खी हुन्छु ।
रेखा थापाले डेटिङमा जाऊँ भनिन् भने के गर्नुहुन्छ ?
रेखाको प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार गर्छु, किनभने उनी मलाई मन पर्ने नायिका हुन् ।
अचानक दोस्राे विवाह गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ?
त्यस्तो अवस्था कहिल्यै नपरोस् ।
हनुमानले दर्शन दिएर वर माग भने भने ?
म त हनुमानजीकै व्रत लिने मान्छे हुँ । यदि त्यस्तो मौका पाएँ भने मेची-महाकाली रेलमार्ग निर्माण गरिदिनुस् भन्छु ।
विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तानले जित्यो भने ?
धेरै खुसी हुनेछु । अफगानिस्तानले अहिले जित्नु भनेको अर्को विश्वकपमा नेपालले जित्नु हो ।
चियामा चिनीको साटो नुन राखेर दिइयो भने ?
त्यस्तो अवस्थामा मनमनै असाध्यै रिसाउँछु, बाहिरचाहिं हाँसी-हाँसी खाइदिन्छु ।
श्रीमतीमाथि किन सौता हाल्ने ?
- शिवहरि पौडेल, मुखाँ हानु जस्तो
दिउँसै सपना देख्नुभएको छ ?
दिउँसो सुत्ने बानी नै छैन ।
विकृति बढेर सृष्टिको विनाश गर्नेबेला भैसक्यो भन्छु ।
नेपालले विश्वकप फुटबल खेल्ने पक्का भयो भने ?
त्यो पटकको विश्वकप फुटबल नेपालमै हुनुपर्छ ।
जेरीको स्वाद तीतो रै"छ भने ?
जीब्रो जँचाउन जानु पर्ने हुन्छ ।
नायिका नम्रताले तपाईंसँग विवाह गर्छु भनेर जिद्दी गरिन् भने ?
घरकी त्यस्तै सोझी र लभ्ली श्रीमतीमाथि किन सौता हाल्ने ?
जब पर्‍यो राति अनि बूढी ताती किन भनिएको होला ?
दिउँसो फुर्सद नभएर ।
वास्तविक जीवनमै दुईवटी श्रीमती भए भने कसरी सम्हाल्नुहुन्छ ?
दुईटीले चैं मलाई सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ ।
बाटोमा हिँडेका बेला कुनै युवतीले च्याप्प समातेर किस गरिन् भने ?
आफू जवान र राम्रो रै'छु भनेर दंग पर्छु ।
कानमा पर्‍यो भन्छु
- किरण केसी, राता मकै
जीवन कसैसँग साट्न पाए को सँग साट्नु हुन्छ ?
आफैसँग साटथे र त्यस्तो मौका पाएँ भने केटी बनेर हेर्थे ।
टमाटर फल हो कि तरकारी ?
जहाँ पनि फिट हुने खुबी भएकाले त्यो फल पनि होइन, तरकारी पनि होइन, नेता हो ।
गुलावजामुनमा गुलाव चाहिँ कहाँ हुन्छ ?
खुसुक्क भन्ने हो भने 'सेन्टर प्वाइन्ट'मा हुन्छ ।
अरूले काम गर्दा तपाईंले पैसा कमाउने जागिर के हो ?
सुपरम्यानले कट्टु बाहिरबाट लगाउने कारण के होला ?
सुरुवाल र्झछ भनेर
कुनै भीडभाड भएको ठाउँमा कुनै युवतीले आएर तपाईंको पाइन्टको फस्नर खुल्लै छ भन्दा ?
लौ तिम्रो आँखा गज्जबकै ठाउँमा परेछ, लाइदेऊ न त भन्थे ।
मोबाइलमा कल गरेर यो कहाँ पर्‍यो ? भनेर सोध्नेलाई के भन्नुहुन्छ ?
कानमा पर्‍यो भन्ने गरेको छु ।
टेलिभिजनका हास्यकार्यक्रममा प्रतिबन्ध लाग्यो भने ?
स्टेज कार्यक्रम गरिन्छ ।
ट्वाइलेटमा हुँदा चुकुल नलागेर गीत गाउनु परेको छ ?
कार्यक्रमको सिलसिलामा बाहिर जाँदा धेरैपटक ला..ला..ला.. गर्दै बसेको छु नि ।
पिसाबबाट मोटरसाइकल चल्ने भयो भने ?
पानी टन्न खान्थे र पानी कम खानेहरूलाई बेच्थे ।
चुम्बन गर्दा केश झर्ने रोग लाग्न थाल्यो भने ?
विग लगाएर चुम्बन गर्ने त
एक पटकमा २५ रसवरी
- आरपी भट्टराई, लादालाम
२ र २ जोड्दा ५ कसरी हुन्छ ?
गल्ती भएर हुन्छ ।
एकपटकमा कतिवटा रसबरी खानुभएको छ ?
चोरेर १६ वटासम्म खाएको छु । नचोरी खान दिइयो भने २५ वटाजति सजिलै खाइदिन्छु ।
धेरै जनासँग विवाह गर्ने छुट पाउनुभयो भने तपाईं कतिवटीसँग विवाह गर्न सक्नुहुन्छ ?
यो प्रश्नले त घरबार नै बिग्रन सक्छ । त्यस्तो छुट पाइयो भने...खै के भन्ने-भन्ने । यदि छुट नै पाइयो भने सबैभन्दा पहिले श्रीमतीसँगै सोध्नुपर्ला, कति वटी ल्याउँ भनेर ।
गर्लफ्रेन्डसँग डेटिङ गएको कुरा श्रीमतीले चाल पाउने एप आयो भने ?
त्यस्तो भयो भने म त फेन्ट नै हुन्छु । फेन्ट हुनबाट बच्न श्रीमतीलाई स्मार्ट फोन चलाउनै दिन्नँ, चलाए पनि त्यो एप राख्न दिन्न ।
एक दिनको प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो भने दिनभरिमा के गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले संविधानसभाबाट ६ सय १ वटै कुर्सी बाहिर फाल्थें । त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई समेटेर मन्त्रिमण्डल गठन गर्थें । मापसे जाँच गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउँथें । डेडिङ जानेहरूलाई राम्रो पार्कको व्यवस्था गरिदिन्थें ।
अरूभन्दा फरक देखिन । अरूले जस्तै भित्रबाट कट्टु लगायो भने सुपरम्यान र सामान्य मानिसबीच फरक नै भएन नि ।
ट्वाइलेटमा हुँदा चुकुल नलागेर गीत गाउनुपरेको छ ?
त्यस्तो त धेरै पटक भएको छ । त्यस्तो बेला म ठूल्ठूलो स्वरमा गीत गाउँछु ।
सार्वजनिक यातायातमा पिसाबले अति च्यापेका बेला के गर्नुहुन्छ ?
दिसा पिसाब मुक्त क्षेत्र बनाउने अभिनयमा लागिरहेका बेला यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो ।
साथीहरु स्कुटीको हावा चेक गर्छन्
- अंशु महर्जन, हात्ती
तीन दिनसम्म खानेकुरा खान प्रतिबन्ध लगाइयो भने के गर्नुहुन्छ ?
म त मर्छु होला, त्यसै पनि प्रेसरको बिरामी छु ।
तपाईंको तौल अचानक घटेर ४५ केजी भयो भने ?
त्यस्तो भयो भने म दु:खी हुन्छु, शरीरमा मासु नै हुँदैन । हड्डी मात्र हुन्छ ।
तपाईं चढ्नेबित्तिकै प्रत्येक स्कुटर पञ्चर हुन थाले के होला ?
आजसम्म त्यस्तो स्थितिको सामना गर्नु परेको छैन, तर साथीहरूको स्कुटीमा चढ्नुअघि उनीहरू चक्काको हावाचाहिँ चेक गर्छन् ।
तपाईंले माइक्रोबसमा एउटाको साटो दुईवटा टिकट काट्ने अवस्था आयो भने ?
एक-दुई पटक भनेका थिए, पहिले-पहिले ।
साप्ताहिकको ब्लोअपका लागि फोटोसेसन गर्ने हो ?
पहिले त छापिएकै हो । किन म साप्ताहिकको ब्लोअपमा आउन लायक छैन र ?
सिनेमा हलमा चलचित्र हेर्ने क्रममा भूकम्प गयो भने के होला ?
म आजसम्म भूकम्प आयो भनेर दौडिएको छैन । दौडिँदा भूकम्पको झट्का डबल होला कि भन्ने डर लाग्छ ।
हास्यकलाकार आरपी भट्टराईले डेटिङ जाने प्रस्ताव राखे भने ?
आम्मामा...भयो । म आफू मोटी भए पनि मलाई फिट एन्ड फाइन केटामात्र मनपर्छ ।
बजारमा तपाईंको साइजको रेडिमेड पहिरन नै पाउन छाडियो भने ?
अहिले पनि मुस्किलले मात्र पाइन्छ । टेलर मास्टर धनी हुन्छ ।
बाटोमा हिंड्दा-हिंड्दै कसैले गालामा म्वाइँ खायो भने ?
कसको हिम्मत होला ? यदि कसैले हिम्मत नै गरेछ भने त्यसलाई सलाम गर्छु ।
आर्यन सिग्देलकी नायिका भएर अभिनय गर्ने प्रस्ताव आयो भने ?
त्यो त आर्यन सिग्देलको भाग्य हो ।
प्रचण्डको मोबाइलमा डायल गर्ने
- हरिवंश आचार्य (नेवारबहादुर)
अचेल सजिलो छ । विग अर्थात् नक्कली कपाल बनायो, त्यसैमाथि लगायो ।
एउटा लामखुट्टे तपाईंकी श्रीमतीको गालामा आएर बस्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
श्रीमतीलाई झापड हान्नु त भएन, माया लाग्छ । बरु त्यसको छेउमा गएर नमस्ते गर्थे र त्यही नमस्तेमा च्यापेर अचार बनाउँथे ।
गुरु द्र्रोणाचार्यले आजको समयमा एकलब्यसँग बूढी औंला मागे भने उनले के देलान ?
बाघले घाँस खान थाल्यो भने के होला ?
नेताहरूले घूस खान छाड्छन् ।
गोजीको पैसा हेरेर । कम छ भने विवाहित, धेरै छ भने अविवाहित ।
स्वाइन फ्लु, बर्ड फ्लु जस्तै धेरै हास्ने मानिसलाई ँहास्य फ्लु’ लाग्ने भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
नेपालका जनतालाई लागि सक्यो । धेरैले हाँस्नै बिर्सिसके । त्यसको भाइरस चाहिँ संविधानसभा भवनभित्र बस्छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा पिसाबले अति च्यापेको बेला के गर्नुहुन्छ ?
सुलुलु छाडदिने, कसैले देख्यो भने उसैलाई दोष लाइदिने ।
संविधान बन्यो कि बनेर भनेर बुझ्न कति नम्बरमा डायल गर्ने ?
एउटी ल्याउँदा अर्की फ्रिको स्किम आयो भने के गर्नुहुन्छ ?
एउटी राख्छु, अर्की बेच्छु ।
अमेरिका कुन देशमा पर्छ ?
यूएसएमा हो कि ?
श्रीमान्ले तीजको व्रत बस्दा फरक पर्दैन
- केदार घिमिरे (माग्ने बूढो)
तपाईंलाई सबैभन्दा रिस उठाउने कुरा के हो ?
जसले पैसा तिर्नु छ उसैको ठूला कुरा सुन्नु ।
कलाकारहरू राजनीतिमा लागिरहेको छन्, तपाईंको विचार के छ ?
राजनीतिज्ञहरू पनि त नाटक गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञहरू कलाकारितामा लागेका छन्, कलाकारहरू पनि राजनीतिमा गए होला ।
कुकुरले बिजुलीको खम्बा देख्ने बित्तिकै खुट्टा उठाउने कारण के होला ?
पानी कम भएर लोडसेडिङ भयो भन्ने लाग्यो होला, त्यही भएर पानीको मात्रा बढाउन त्यसो गरेको ।
भोक त नलाग्नु पर्ने बेला पनि आइसक्यो नि । खेतीयोग्य जमिन सबै प्लटिङ भएर सिद्धिए, अलि-अलि भएको जमिनमा पनि खेती गर्ने कोही छैनन्, सबै विदेश पलायन भैसके ।
स्वाइनफ्लु, बर्डफ्लु जस्तै धेरै हास्ने मानिसलाई हास्यफ्लु लाग्ने भयो भने, तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
हास्य फ्लू लागेर मान्छे आफैं हास्न थाले भने त हामी त रिटायर्ड भैहाल्यौ नि । पेन्सन होइन टेन्सन खाने बस्ने ।
तीजको व्रत श्रीमान्ले राख्नै पर्ने नियम आएछ भने ?
त्यो त हुनै पर्छ नि । श्रीमतीचाहिँ श्रीमान्प्रति इमान्दार हुनुपर्ने, श्रीमान् चाहिँ हुनु नपर्ने भन्ने हुँदैन । श्रीमान्ले पनि व्रत बस्दा फरक पर्दैन ।
युवतीको गालालाई स्याउसंग किन दाँजिएको होला ?
युवतीको गालामा दाह्री नभएर होला । स्याउको पनि दाह्री हुँदैन नि, नत्र त स्कुससँग दाँजिन्थ्यो होला ।
चुम्बन गर्दा कपाल झर्ने रोग लाग्न थाल्यो भने ?
विग पसलहरू टन्नै खुल्थे । चुम्बन गर्ने विग किन्ने ।
धेरै जनासँग विवाह गर्ने छुट पाउनुभयो भने कतिवटीसँग गर्न सक्नुहुन्छ ?
विवाहपछिको जिम्मेवारी पूरा गर्नु नपर्ने भए त धेरै जनासंग गरिन्थ्यो । जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने भएपछि किन धेरै जनासँग विवाह गरिरहनु पर्‍यो र ?
मलाई त केही फरक पर्दैन । यो प्रश्न धेरै गर्लफ्रेन्ड हुनेहरूसँग सोध्नु न ।
एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
म त दिनभरी सुतिरहन्छु । उठेर काम गर्ने भए पनि विपक्षीले काम गर्न दिने होइनन् ।
आइ लभ यूभन्दा थप्पड खानुभएको छ ?
भनेको भए खाइन्थ्यो होला, अहिलेसम्म भनिएकै छैन ।
खाना खाइरहेका बेला कोही आएर के गर्दै ? भनेर सोध्दा, जवाफ के दिनुहुन्छ ?
सागसब्जी तथा पहेंला फलफूल खाने सल्लाह दिन्छु ।
जहाँ गर्‍यो, त्यहीं पर्छ भनिदिन्छु ।
दुवै हो जस्तो लाग्छ तर होलीको बेलामा चाहिँ तोप पनि हो । अचेल लोलाको साटो यसकै प्रयोग बढ्दो छ ।
श्रीमती फेर्न मिल्दैन
- जितु नेपाल, मुन्द्रे
लुम्बिनी नेपालमा छ । नेपाल विश्वमा छ ।
फेरि विवाह गर्छ कि गर्दैन सोध्ने, आफैं चिनिन्छ ।
नखाउन्जेल तरकारी र फल, खाएपछि मल ।
यदि त्यस्तो भयो भने पुरुषहरूले सिन्दूर लगाउन थाल्छन् ।
मैले केही गर्नै पर्दैन, जे गर्छ लामखुट्टेले गर्छ ।
गुरु द्रोणाचार्यले आजको समयमा एकलव्यसँग बूढी औंला मागे भने ?
एकलव्यसँग चारवटा औंला मात्र बाँकी रहन्छ ।
यदि तपाईंले "असफलता" सम्बन्धी पुस्तक लेख्नुभयो, तर त्यो बिक्री नै भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
पुस्तक बिक्री भएन भने प्रकाशकलाई घाटा हुन्छ र ऊ पनि असफल हुन्छ ।
जितु नेपालको सोर्स लगाउनुपर्छ ।
सुपरम्यानले बाहिर कट्टु लगाउने कारण के होला ?
हाइड्रोसिलको अप्रेसन गरेको भएर होला ।
एउटा त्यस्तो प्रश्न जसको उत्तर दिन तपाईंलाई घृणा लाग्छ ?
सेक्ससम्बन्धी प्रश्न । यो उत्तर दिने प्रश्न नै होइन ।
तपाईंलाई सबैभन्दा हाँसउठ्दो क्षण ?
हाँस प्राय: उठेकै देखिन्छ, बसेको त्यति देखिँदैन ।
प्रकृतिले दिनका साथै रात किन बनाएको होला ?
रातलाई पनि दिन बनाएको भए सम्भवत: हामी पैदा नै हुने थिएनौं ।
मोबाइल फेरिरहन मिल्छ, श्रीमती फेर्न मिल्दैन ।
बाघले घाँस खान थाल्यो भने ?
बाख्राले पनि मासु खान थाल्छ ।
श्रीमती र प्रेमिकामा के फरक पाउनुहुन्छ ?
हिजोआज दुवैले फरक लाउँदैनन्, अरू नै लुगा लाउँछन् ।
जलस्रोतको धनी देशमा लोडसेडिङ
- विल्सन विक्रम राई (तक्मे बूढो)
फलको बोटको हाँगो निहुरिन्छ भन्ने उखानलाई मान्दा टमाटर फल्दा खेरी बोट निहुरिएको हुन्छ, त्यसैले यो फल हो ।
दिदीको भाग्यमा जुत्ता गन्हाउने लोग्ने पर्‍यो कि भन्ने कुरा सुँघेर पत्ता लगाउन् ।
महिलाहरू तालु खुइले भए सिन्दूर कहाँ लगाउँछन् ?
अहिले त सिन्दूरको डब्बा ड्रेसिङ टेबुलको ड्रयरमा लुकाएर सिन्दूर नै नलाउने फेसन पो आ'को छ क्यार । सयमा ७५ ले सिन्दूर लुकाएर आफूलाई अविवाहित जस्तो बनाएको देख्छु । लाउनै नपरे कपाल खुइलियोस् कि नखुइलियोस्, के मतलब भो र ?
गुलाब जामुनमा गुलाब कहाँ हुन्छ ?
न गुलाब हुन्छ, न जामुन हुन्छ बस कालो गोलो हुन्छ ।
एउटा लामखुट्टे तपाईंकी गर्लफ्रेन्डको गालामा बसेको देख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यसलाई समातेर त्यसको लामो खुट्टा काटेर त्यसकै व्वाइफ्रेन्डको जिम्मा लगाइदिन्थे । मेरी गर्लफ्रेन्डको गालामा बस्ने त्यसको त्यत्रो हिम्मत ?
अरूले काम गर्दा तपाईंले पैसा कमाउने जागिर के होला ?
मान्छे विदेश पठाउने काम ।
गुरु द्रोणाचार्यले आजको समयमा एकलब्यसँग बूढी औंला मागे भने उनले के देलान ?
म एकलब्य भएँ भने त मेरो जवाफ यस्तो हुन्थ्यो 'सरी गुरु, मेरो बूढी औंला केटीहरूको फोटो लाइक गर्न बिजी छ ल ।'
विज्ञापन एजेन्सीकै विज्ञापन चाहिँ किन नबनेको होला ?
जलस्रोतको धनी देशमा लोडसेडिङ भने जस्तै भएको होला ।
लिंग परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
सुरुवालभन्दा कट्टु ब्राण्डेड भएर होला नि !
१२ वर्षको छोरो हुन्थ्यो
- दीपाश्री निरौला
जेरीको स्वाद तीतो हुने भए ?
हाम्रो टेलिश्रृंखलाको शीर्षक 'तीतो सत्य' होइन, 'जेरी सत्य' हुन्थ्यो ।
सुशील कोइरालाले दीपाश्रीसँग बिहे गर्छु भनेर मरिहत्ते गरे भने ?
म त दंग पर्थें, तर सुजाता कोइराला रिसाउलिन, किनभने अर्को सार्कमा प्रथम महिला हुन पाउँदिनन् नि फेरि ।
यौवन अवस्थामै दीपकराज गिरीसँग जोडी जमेको भए के हुन्थ्यो ?
१२ वर्षको 'तीतो सत्य' होइन, १२ वर्षको छोरो हुन्थ्यो ।
मंगल ग्रहमा लान पाए कसलाई लानुहुन्थ्यो ?
६ सय १ लाई रकेटमा कच्याककुचुक पारेर लान्थे र त्यतै छाडेर र्फकन्थे ।
सनी लियोनले दीपकलाई दीपाश्रीको संगत छाडिदेऊ, म तीतो सत्यमा तिमीसँग खेल्छु भनिन् भने दीपकले के गर्लान् ?
नेपाल टेलिभिजनले प्रसारण नै गर्दैन, खेलेर मात्र के गर्ने बिचरी सनी लियोनले ।
फेरि १६ वर्षको हुन पाए ?
अहिले म १६ वर्षकी जस्तो देखिएकी छैन र ?
मापसेमा परेका बेला के गर्नुहुन्छ ?
मापसे गरेका बेला सवारी साधन चलाउनै हुन्न नि ।
विदेशमा जसरी विवाह नगरी सन्तान पाउन वैधानिक मानियो भने ?
गज्जबै हुन्छ, नयाँ संविधानमा त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । हाम्रो माग पूरा गर ।
तपाईंको वजनले गर्दा बसेको कुर्सी भाँचिएको छ ?
म त हल्काफुल्का नै छु । त्यसैले त्यस्तो हुने चान्सै छैन (हि..हि), बरु हालै एक जना मोटो शरीरका धनी पत्रकार दाजुले सिनेमाहल भित्र त्यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुभयो रे भन्ने सुनेकी छु । ती दाइ शान्तिप्रियचाहिँ होइनन् है ।
तपाईंमाथि हाँस्ने प्रतिबन्ध लगाइयो भने ?
म नहाँसी अरूलाई हँसाउँछु ।
संकटपूर्ण स्थितिमा कसरी तिहार मनाउने निधो गर्नुभएको छ ?
पारसलाई ऋषि धमलाको सनसनीपूर्ण प्रश्न
दर्शक स्रोताको मन जितेकी छु
नेताको प्रश्न मुन्द्रेको जवाफ
तन्नेरी होली फाल्गुन ३०, २०७३
भाङको पेडा फाल्गुन २९, २०७३
अझै ५/१० वटा लोला हान् भन्छु फाल्गुन २९, २०७३
लोला फाल्गुन २९, २०७३
होली र भाङ फाल्गुन १५, २०७१
जोगिरा सरर..... फाल्गुन ३०, २०७०
जोगिरा सरर... फाल्गुन ३०, २०७०
चट्याङ मास्टरको होली हुड्दङ फाल्गुन ३०, २०७०
कुन रंग केको प्रतीक फाल्गुन ३०, २०७०
कुन देशमा कसरी मनाइन्छ होली ? फाल्गुन ३०, २०७०